(18.9.2020) အိုသခင်ဘုရား၊ ကိုယ်တော်၏ဘုန်းတော်ထင်ရှားသောကာလ၌ တပည့်တော်၏ပျော်ရွှင်မှုသည် ပြည့်စုံခြင်းသို့ရောက်ပါလိမ့်မည်။(ဆာလံ ၁၇: ၁၅ခ) I shall be filled, when I awake, with the sight of your glory, O Lord.(Ps 17: 15b) (18.9.2020)
Catholic Religious Conference of Myanmar
CATHOLIC RELIGIOUS CONFERENCE OF MYANMAR (CRCM)
HIS GRACE ARCHBISHOP PAUL TSCHANGIN-NAM
Apostolic Nunciature to the Republic of the Union of Myanmar
The Most Reverend Monsignor Paul Tschang In-Nam was born in Seoul on the 30th of October 1949, was ordainedapriest on the 17th of December 1976 for the Diocese of Cheongju (South Korea). He was appointed Titular Archbishop of Amantia and Apostolic Nuncio to Bangladesh on the 19th of October 2002. On6January 2003, Pope John Paul II consecrated him as Bishop. On the 27th of August 2007, Pope Benedict XVI appointed him as Apostolic Nuncio to Uganda.
On Saturday, August 4, 2012, His Holiness Pope Benedict XVI has graciously appointed his Grace Archbishop Paul Tschang In-Nam, as Apostolic Nuncio to the Republic of Uganda, to the Kingdom of Thailand and to the Kingdom of Cambodia, as well as Apostolic Numio to the Republic of the Union of Myanmar and to the Lao People’s The Democratic Republic.
On August 12. 2017, the Holy Father Pope Francis appointed Archbishop Paul Tshang In- Nam as Nuncio to Myanmar.
Address Apostolic Nunciature 217/1 Sathorn Tai Road Bangkok 10120, Thailand
Tel (66) – (2) 212 5853, 212 5854
Fax (66) – (2) 212 0932
HIS EMINENCE CARDINAL CHARLES BO
Date of birth: 29.10.1948
Ordained Priest: 09.04.1976
Ordained Bishop (Lashio): 16.12.1990
Installed Bishop of Pathein 25.08.1996
Appointed Apostolic Administrator of
Mandalay Archdiocese: 03.04.2002
Appointed Archbishop of Yangon Archdiocese: 24.05.2003
Installed Archbishop of Yangon: 07. 06. 2003
Appointed 1st Cardinal of Myanmar: 04. 01. 2015
Installed 1st Cardinal of Myanmar: 14. 02.2015
Address: Archbishop’s House 289, Theinbyu Road Botahtaung P.O.11161Yangon, Myanmar
Tel: +95(0) 1245467, 392517,392667
Fax: +95 (0) 379059
Secretary-Treasurer Catholic Bishops’ Conference of Myanmar
Head: Major Seminary, New Site of Major Seminary New Evangelization (National Level)
Head: RVA Services
Head: Education (National Level)
President: Federation of Asian Bishops' Conference (FABC)
Member: Pontifical Commission for Communication (Rome)
Member: Pontifical Council for Culture and Consecrated life (Rome)
HIS EXCELLENCY BISHOPJUSTIN SAW MIN THIDE BISHOP OF HPA-AN
EPISCOPAL COMMISSION FOR THE CONSECRATED LIFE
Date of Birth: 26.03.1951
Ordained Priest: 09.03.1984
Ordained Bishop: 02.12.2007
Installed Bishop of Hpa-An: 03.12.2009
email(personal) : justinsminthide@gmail.com
(office) : hpaandiocese@gmail.com
Phone: 09 252543903
Address: Bishop's House
Thukamein Street, Hpa - An , Kayin State , Myanmar
President Br. Noel Hrang Lal, FSC
Vice President Sr. Lucia Ling Hing Pai, FMM
Councillor Sr. Rita Kyi Kyi Aung (RNDM)
Councillor Sr. Livio Maggi, PIME
Treasurer Sr. Geraldine May Thandar Swe (SJA)
Executive Secretary Sr. Assumpta Shwe, RGS
Address Catholic Religious Conference of Myanmar 112 (A), Bogyoke Aung San Street, Latha Township YANGON, MYANMAR
Tel: 09 425305157
Kyese Newsletter Office
Editor Sr. Eugenie Petronilla (SFX)
Address 112 (A), Bogyoke Aung San Road, Latha Township, Yangon.
Tel: 09794511950 (options)
Myanmar Institute of Religious Studies (MIRS)
Directress Sr. Bernadette Ki Myu Mang FMM
Tel: 01 395645/ 09 426216030
Email: mirsmyanmar@gmail.com mang.bernadette9@gmail.com
THE HISTORY OF THE CATHOLIC RELIGIOUS CONFERENCE OF MYANMAR
After the nationalization in 1965, the Religious Major Superiors had no proper premise for their annual or semi-annual gathering.
Later, Archbishop V. Bazin accommodated them in the hall of the Minor Seminary attached to the Archbishop’s House on Theinbyu Road, for some years gathered at the Christian Brother’s place and for several years at the St. Francis Convent for such occasions.
Regarding the bad need ofapremise of their own, they applied to the Mission forasubsidy through the Apostolic Delegate to Myanmar.
In course of time, the E.C. Members of both the CBCM (Bishops’ Conference) and CRM (Religious Conference) went about together in and out of the town in search of any available plot of the ground or building in the vicinity of any Parish Church. They went as far as seven andahalf miles without success. In the end, they decided to abide by the suggestion of the Local Ordinary to take up the backyard of the Good Shepherd Convent. The Inauguration of the CRCM Centre was on Monday the 13th of June, 1988. The target of the Centre would beaHouse of Prayer and Spiritual Animation for all the Religious in the country asasort of budding flower bed for the church of Myanmar.
IT’S OBJECTIVE WHEN FOUNDED
1. To promote unity among the different Religious Congregations in Myanmar
2. To study common problems and act unitedly
3. To provide formation for our young religious, and also to continue formation for all religious
Ø To foster the growth of religious life in depth
Ø To promote an effective presence in the apostolate in the various religious Congregations and the Societies of Apostolic Life
Ø To enhance co-operation among all religious congregations and the Societies of Apostolic Life as well as with the Bishops’ Conference.
Since the time of the foundation of the Religious Conference of Myanmar, the courses run by this Conference have been strengthening, feeding, liberating, and helping Religious to grow deeper in the relationship with God.
CRCM VISION AND MISSION
Rooted in the Gospel, asaunited body, we seek to beadynamic and pro-active presence of the Church to the people of Myanmar.
At the service of the Kingdom of God in Myanmar, we commit ourselves:
» to enhance the quality of religious life in the changing world.
» to serve the Church and the nation by taking the prophetic role in responding to the signs of the times
» to beasign of communion in our collaborative services
အမိမြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ ကက်သလစ်သူတော်စင်များ ရှေးဦးသာသနာပြုလက်ထက်ကပင် ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး တိုင်းရင်သားများအားလုံးကို ကျောသားရင်သား မခွဲခြားပဲ ကျရာကဏ္ဍတွင် နည်းမျိုးစုံဖြင့် သာသနာ့အမှုတော် ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ရှင်ဘုရင်ခေတ်မှစ၍ လွတ်လပ်ရေးရပြီး နိုင်ငံတော်ပြန်လည်တည်ထောင်ရေးကာလအထိ တမန်တော်လုပ်ငန်းများကို လွတ်လပ်စွာလုပ်ကိုင်ခွင့် ရခဲ့သည့်အတွက် သူတော်စင်များအနေဖြင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများတွင် အမိမြန်မာပြည်အား စိတ်အားထက်သန်စွာ ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၂ တွင် အစိုးရအာဏာသိမ်းပြီးနောက် ၁၉၆၆ တွင် နိုင်ငံခြားသာသနာပြုများ အမိမြန်မာပြည်မှ အပြီးအပိုင် ထွက်ခွာခဲ့ကြရသည်။
နိုင်ငံခြားသာသနာပြုများ အပြီးအပိုင်ထွက်သွားရပြီးနောက် ကျန်ရှိခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသား သူတော်စင်များကို ဆရာတော်ကြီး Victor Bazin, MEP မှ အဓိက စည်းရုံးအားပေးခဲ့သည်။ ၁၉၆၅ သာသနာပြုကျောင်းများ သိမ်းခံရပြီးနောက်၊ ကက်သလစ်သူတော်စင် အကြီးအကဲများအနေဖြင့် ပုံမှန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် နေရာအတည်တကျမရှိတော့ပေ။ ပထမတွင် ဆရာတော်ကြီး Victor Bazin ၏ အကူအညီဖြင့် ရန်ကုန် ရဟန်းဖြစ်တက္ကသိုလ်ခန်းမဆောင်တွင် တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။ ထို့နောက် ၇ မိုင်ရှိ ဒေလာဆာလ် ဘရာသာရ်ကျောင်းတွင်လည်းကောင်း၊ တာမွေရှိ စိန်ဖရန်စစ်သီလရှင်ကျောင်းတွင်လည်းကောင်း တွေ့ဆုံခဲ့ကြသည်။
၁၉၇၂ တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကက်သလစ်သူတော်စင်များအဖွဲ့အတွက် Sr. Pamela Browne, FMM ကို ပထမဆုံး (President of CRCM) တာဝန်ခံအဖြစ်၊ Brother Gabriel, FSC (Vice President)၊ Sr. Rose Clare, ISR (Secretary) တို့အား ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ အခက်အခဲကြားမှပင် သူတော်စင်များအတွက် ဝိညာဉ်ခွန်အား၊ စိတ်ဓါတ်ခွန်အား ရရှိစေမည့် သင်တန်းများစွာကို ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ အဖွဲ့ဝင်များအားလုံး၏ သဘောတူညီမှုဖြင့် ကောင်းသောသိုးထိန်းသီလရှင်ကျောင်းဝင်း အတွင်းဖက်မြေကွက်တွင် သူတော်စင်များအားလုံးအတွက် ဋ္ဌာနချုပ်ကို ဆောက်လုပ်ခဲ့သည်။
၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၃) ရက်နေ့တွင် “Regina Mundi” အမည်ဖြင့် လက်ရှိ ကက်သလစ်သူတော်စင်များဋ္ဌာနချုပ်ကို ကောင်းကြီးပေးဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကက်သလစ်သူတော်စင်များ၏ ဗဟိုဋ္ဌာနချုပ် တည်ထောင်ခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ
- သူတော်စင်အသင်းများတွင် စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရှိစေရန်
- အခက်အခဲများကို အတူတကွ စည်းလုံးစွာကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်
- သူတော်စင်များအတွက် ပြန်လည်ခွန်အားဖြစ်စေသော သင်တန်းများ စီစဉ်ပေးရန်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံတွင် သူတော်စင်အသင်း (၄၅) သင်းရှိပြီး သူတော်စင် ဦးရေမှာ ၂၈၄၇ ပါး ရှိသည်။ ဆက်လက်ပြီး သူတော်စင်များအတွက် (Renewal course) အမျိုးမျိုးကို ဋ္ဌာနချုပ်မှ ဦးဆောင်ဖွင့်လှစ် ပေးနေပါသည်။ ၎င်းအပြင် သူတော်စင်အသင်းများနှင့် လူ့အဖွဲ့အစည်းအား အထောက်အကူပြုပြီး ပြောင်းလဲပုံဖော်နိုင်ရန်၊ သမ္မာတရားတော်မြတ်ကို မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားကာ ထိရောက်စွာ သက်သေခံမည့် သူများပေါ်ထွက်လာစေရန်၊ ပညာထူးချွန်ပြီးစနစ်တကျ ပြုစုပျိုးထောင်ထားသော ရဟန်း၊ သီလရှင်များနှင့် အသင်းတော်အတွက် အမှုဆောင်သူ (လူဝတ်ကြောင်) များအား မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရန် အတွက် ဓမ္မတက္ကသိုလ် (MIRS) မှ ဝိဇ္ဖာဘွဲ့ (၃) နှစ် သင်တန်းနှင့် (၁) နှစ်သင်တန်း အစီအစဉ်ကို ဆောင်ကျဉ်းပေးနေပါသည်။
ဝိညာဉ်ရေး ပြန်လည်အားဖြည့်သော သင်တန်းများအပြင် လူမှုအသိပညာပေးသင်တန်းများကိုလည်း စီစဉ်ပေးလျှက်ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ
- လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အသိပညာပေးသင်တန်းများ
- ခေါင်းဆောင်မှု သင်တန်းများ
- အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးသူငယ်များ အထူးစောင့်ရှောက်ခြင်း သင်တန်းများ
- လူကုန်ကူးမှုတားဆီးခြင်းနှင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာနေထိုင်မှု အန္တာရယ်ကင်းစေရေး သင်တန်းများ
- သီလရှင်လောင်းများနှင့် ယာယီကတိသစ္စာခံယူ သီလရှင်များအတွက် အထူးသင်တန်းများ ဆောင်ကျဉ်းပေးနေပါသည်။
ကက်သလစ်သူတော်စင်များအဖွဲ့ချုပ်တွင် သူတော်စင်အကြီးအကဲများသည် (၁) နှစ်လျှင် (၂) ကြိမ်တွေ့ဆုံပြီး နှီးနှောဖလှယ်မှုများ ပြုလုပ်ကြသည်။ မြန်မာပြည် ကက်သလစ်အသင်းတော်အတွက်သာမက မြန်မာပြည်ရှိ လူမျိုးဘာသာမရွေးဆီသို့ တမန်တော်လုပ်ငန်းကို ခေတ်ကာလ၏တောင်းဆိုချက်နှင့်အညီ အကောင်းဆုံး တုန့်ပြန်နိုင်ရန်အတွက် အတူတကွ ပူးပေါင်းဆွေးနွေးကာ နည်းလမ်းရှာဖွေကြရင်း သာသနာ့အမှုတော်ကို ဇွဲစွတ်ထက်သန်စွာဖြင့် ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းနေကြပါသည်။